Home News Musharaxiinta Doorashada DG Koonfur Galbeed oo dacwad ka gudbiyay Maamulka Sharif Xassan
Musharaxiinta Doorashada DG Koonfur Galbeed oo dacwad ka gudbiyay Maamulka Sharif Xassan
Iyada oo maalmihii u danbeeysay ay socotay soo bandhiga musharaxiinta u tartamaya jagada Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa waxa sidoo kale bilaawday eedayn ay soo jeediyeen dhamaan musharaxiinta ka soo horjeedo MW Sharif Xassan. Waxaa kulan balaaran ka dhacay Xarunta Qaramada Midoobay ee fadhigeedu yahay Magaalada Baydhabo. Kulankaas ayaa musharaxiintu ku sheegan in doorashadda ay ka hartay in ka yar 50 maalin haadana ayan jirin wax qaban-qaabo ah oo loogu diyaar garoobayo Doorashada ku aadan in ay dhaco bartamaha bisha Nofeenbar. Waxa ay mushraxiintu ku eedeeyn MW Sharif Xassan in uu donayo in uu dib u dhigo doorashada ama uu ku shubto isaga. Waxaana ay musharaxiintu ugu baaqeen beesha Caalamka in ay cadaadis saaran Maamulka Sharif Xassan si doorashada dhacdo xiliigii logo talagalay.
Previous articleCiidamada ammaanka oo gacanta kusoo dhigay Khabiir ka tirsanaa Al-Shabaab September 28, 2018
Next articleOdoyaasha Dhaqanka ee reer Hiiraan oo ka hor yimid baaqa Yuusuf Dabageed
Maxakamadda Cabdiraxman C/Shakuur oo ay Suuragal tahay in looga Yeero Safiirka...
Wiilal Soomaali ah oo Lagu Dilay London